OGAYSIIS: Waqtiga xaadirka ah guryaha gaarka ah waxaa keliya haddii ay xaalado adag jiraan (go'aanka waxaa sameeyey Xafiiska Daryeelka Bulshada) ama haddii aad gurigaaga ku maalgelin kartid shaqo. Mar labaad, ogolaasho xafiiska sooshalka waa in marka hore laga helaa.
Magaalada Sprockhövel ayaa mas'uul ka ah hoyga.
Waxaa suurtogal ah inaad guri kiro ah ku kireeysid Sprockhövel - sidoo kale magacaaga.Taas awgeed, foomka dalabaadka ee u dhigma waa inuu buuxiyaa mulkiilaha mustaqbalka / mulkiilaha.
Dalabka kirada waxaa hubiya xafiiska cayrta (Frau Nachtigall) ee magaalada Sprockhövel, ka dibna xitaa waxay xannaaneysaa qandaraaska. Wakiilada qaxootiga ee magaalada Sprockhövel (Sarah Biet-Sayah iyo Michael Bergediek) ayaa gacan ka geysanaayo. Xitaa guryaha waaweyn waa lagu kireysan karaa dad badan. Kaararka kirada iyo kaalmooyinka iskaashatada waxaa laga yaabaa in ay hore u maalgeliyaan Xafiiska Daryeelka Bulshada, kadibna la siiyaa qaybaha kala duwan ee Daryeelka Bulshada iyada oo qayb ka ah deynta.
Liis-warbixineed "U guuridda gurigaaga"
Liis-warbixineed "U guuridda gurigaaga" - Macluumaad muhim ah oo ku saabsan sidii aad gurigaaga ugu guuri lahayd.
separation qashinka - Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan kala soocida qashinka
Sprockhövel-ga qaxootiga ayaa siinaya qalab loogu talagalay qalabeynta iyo burburinta alaabta guriga. Tan waxaa lagu qaadan karaa ugu badnaan 4 maalmood oo shaqo oo bilaash ah.
Qalabkee hadda la heli karaa, waxaa laga arki karaa halkan:
Qalabka amaahda amaahda Qalabka gargaarka degaanka Sprockhövel